Mnike isongo lakhe: Owamanqamu phakathi kweBulls neSharks kusasa eLoftus Versveld - Bayede News
Ugixabezwe igunya lokungenela ukhetho lweCAF uMotsepe
Iqembu lombhoxo elikhulu esifundazweni iKwaZulu-Natal iCell C Sharks, liyidlale kabi imidlalo yalo yeCurrie Cup njengoba belilokhu liba nabadlali abaningi abahaqwe ukhuvethe.
Kodwa emva kokuhlolwa kwabadlali ekuqaleni kwesonto, leli qembu likuqinisekisile lokhu kanti bonke kuvele ukuthi abanalo okusho ukuthi bazobe bekhona emdlalweni wamanqamu ngoMgqibelo lapho lizobe litholene phezulu neqembu lasePitoli iVodacom Bulls. Lo mdlalo uzokuba seLoftus Versfeld Stadium libumbene elesibili ntambama.
Umqeqeshi weCell C Sharks uSean Everitt ukujabulele ukuthi ngaphambi kokuthi baye kulo mdlalo bakwazile ukunqoba umzuliswano wokuqala.
“Umdlalo wokuqala siwunqobile into enhle kakhulu leyo, lo mdlalo wokuqala engikhuluma ngawo ukuhlolela abadlali ukhuvethe. Bonke abadlali bethu baluhlolele ukhuvethe, akukho noyedwa ohaqwe ileli gciwane. Kusho ukuthi sizoba nesikwati esiphelele emdlaweni wethu wamanqamu. Iqembu like labhekana nezinkinga ngesikhathi sisadlalela amaphuzu njengoba bekuphoqa ukuthi singabi nabo abadlali abamqoka,” kusho u-Everitt
IVodacom Blue Bulls ikowamanqamu nje iyona eqede iphezulu kowamaqoqo ngamaphuzu angama-39 emidlalweni eli-12. Kowandulela owamanqamu ihlule iXerox Lions ngamaphuzu angama-26 kwangama-21.
ICell C Sharks yona ilale endaweni yesithathu kulogi ngamaphuzu angama-35 kanti kowandulela owamanqamu ihlule IDHL Stormers ngamaphuzu ali-19 kwayisi-9.
U-Everitt eqhuba ekhuluma ngamalungiselelo omdlalo uthe: “Umbango okhona muhle kakhulu abadlali bawulungele umdlalo bafuna ukuwunqoba nakanjani. Iqembu kade lagcina ukujabulisa abalandeli balo ngakho-ke ithuba elihle kakhulu leli njengoba sesifikile emdlaweni wamanqamu.”
ICell C Sharks igcine ukunqoba lo mqhudelwano ngonyaka wezi-2018 lapho eyayithole phezulu neWestern Province esiyaziwa ngokuthi iDHL Stormers ngamaphuzu ali-17 kwali-12 emdlalweni owawubanjelwe eNewlands Stadium.
IVodacom Blue Bulls yona igcine ukuwunqoba ngowezi-2009, emdlalweni eyayibhekene kuwona neFree State Cheetahs yanqoba ngamaphuzu angama-36 kwangama-34.
Kanti la maqembu womabili agcina ukutholana kowamanqamu kulo mqhudelwano ngonyaka wezi-2008. Sekuwumlando ukuthi lowo mdlalo owawubanjelwe eKings Park Stadium, eThekwini, wagcina unqotshwe oShaka ngamaphuzu ali-19 kwayisi-9.
Impumelelo uhlala eyilangazelela umgwedli osemncane
Isithenjwa seBlue Bulls u-Ivan van Zyl sithe sifuna kufezeke iphupho laso leminyaka naleli qembu.
“Kumina usuku lwangoMgqibelo ngolukhulu, kwazise ngizobe ngidlala umdlalo omkhulu kakhulu. Ukudlala kowamanqamu weCurrie Cup, bekulokhu kuyiphupho kimi. Ngikhula bengihlezi ngifuna ukubona iBulls idlala imidlalo yamanqamu. Kulokhu kuyajabulisa ukuthi ngizobe ngikhona nami ngidlala nginethuba lokunqobisa iqembu,” kusho uVan Zyl oneminyaka eyisi-8 edlalela leli qembu.
Eqhuba uthe: “Imizuzu engama-80 kuphela esinayo ukuthi sikwazi ukuba ngompetha, iqembu lami ngiyalethemba kakhulu. Inkundla engathi ingaba sesimweni esifanele ukuthi womabili amaqembu akwazi ukudlala. Lona kuzoba umdlalo omnandi kakhulu, womabili la maqembu anomlando omkhulu.”
Iqembu elivikela lo mqhudelwano yiFree State Cheetahs, elahlula iXerox Lions ngamaphuzu angama-31 kwangama-28.
Ngokomlando iqembu eselike lanqoba lo mqhudelwano izikhawu eziningi iWestern Province ezingama-34, iBlue Bulls ezingama-23, iXerox kayi-11, iSharks kayisi-8, iFree State Cheetahs kayisi-6 kube iGriquas kathathu.
nguSabelo Maphumulo Jan 29, 2021